सरकारले सुरू गर्यो द्रुतगतिबाट राहदानी वितरण, अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिने | Hulaki Online
२०७३ असार १९, आईतवार १५:१३
2020 Sep 20, Sunday 01:03
सरकारले सुरू गर्यो द्रुतगतिबाट राहदानी वितरण, अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिने
काठमाडौँ, १९ असार , सरकारले आजदेखि द्रुत गतिबाट राहदानी वितरणको कार्य सुरू गरेको छ ।
आज आइतबार उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले द्रुतगतिबाट राहदानी वितरण कार्यको सुरूवात गरेका हुन् । परराष्ट्रमन्त्री थापाले द्रुत गतिको राहदानी वितरण गर्दै यसको सुरूवात गरेका हुन् । उनले दाङकी चन्द्रकली बुढाथोकीलाई राहदानी वितरण गर्दै यसको सुरूवात गरेका छन् ।
सरकारले १५ हजार तिर्नेलाई एकै दिनमा, १२ हजार तिर्नेलाई भोलिपल्ट र १० हजार तिर्नेलाई पर्सीपल्ट राहदान दिने व्यवस्था गरेको हो । सरकारले जिल्लाबाट पनि दोब्बर दस्तुर तिर्नेलाई २४ घण्टाभित्र राहदानी उपलबध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ ।
यसअघि राहदानीका लागि आवेदन दिन चाहने सेवाग्राहीले अनलाइनबाट र्फम डाउनलोड गरी आफैं भर्नुपर्दथ्यो । यसो गर्दा विवरण नमिल्ने, केरमेट हुने र लेखाइसमेत नमिल्ने जस्ता समस्याले सेवाग्राही हैरान हुने गरेका थिए ।
त्यस्तै फोटो आफैँ खिचाउनुपर्दा फोटोको आधार, आकृति नमिल्ने उस्तै समस्या सेवाग्राहीले भोग्नु पर्दथ्यो । सबै विवरण मिलेपनि फारम दर्ता गराउन तीन ठाउँमा घण्टौ लामो लाइनमा बस्नुपर्ने समस्या थियो । सेवाग्राहीको भिड बढ्दा कार्यालयमा समेत काम गर्न असहज हुने गरेको महानिर्देशक थापाले बताए ।
अब अनलाइन फारम भरेर त्यहाँ प्राप्त बारकोड नम्बर बोकेर गएपछि विभाग आफैँले फोटो खिच्ने व्यवस्था मिलाएको छ । यसले गर्दा फोटोको आकार र आकृति नमिल्ने समस्याको अन्त्य हुनेछ ।
त्यस्तै फार्म भर्नका लागि दिनभर लाइन बस्नुपर्नेछैन । फुर्सदको समयमा जुनसुकै समयमा घरबाटै आवेदन दिन सकिनेछ । बाहिर फोटो खिचाउँदा र फारम भर्न लगाउँदा तिर्नुपर्ने अतिरिक्त पैसा पनि अब बचत हुने भएको छ । यसअघि राहदानी बाहेक थप प्रतिव्यक्ति चार सयसम्म तिर्नुपर्दथ्यो ।
जिल्लाको सिफारिस के गर्ने ?
यो सुविधा कहाँको लागि ?
अनलाइन सेवा सबै जिल्लाका लागि भने होइन । नेपालमा विभागबाट जारी हुने पार्सपोर्टका लागि मात्र अहिले यो व्यवस्था गरिएको हो ।
विदेशमा रहेका नागरिकका लागि भने थप सहज भएको छ । अमेरिकामा बस्ने नेपाली नागरिकले अमेरिकास्थित वासिंटन र न्युयोर्क महावाणिज्य दूतावासबाट यो सुविधा लिनसक्नेछन् ।
यस्तै हंगकंग, लण्डन, मलेसिया, कतार, कुवेत, रियाद, जेद्दास्थित नेपाली दूतावासमा पनि पासपोर्टका लागि अनलाइन आवेदन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । दूतावासमा आवेदन दिँदा पनि केन्द्रीय राहदानी बिभागको जस्तै प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ ।
जिल्लालाई थप सुविधा
कार्यविधि अनुसार अहिले जिल्लामा राहदानीका लागि आवेदन दिएको ४५ दिनपछि मात्र राहदानी पाउने व्यवस्था छ । तर जिल्लाले निवेदन परेको करिब एक महिनामा पासपोर्ट उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । अब भने जिल्लामा आवेदन दिनेले पनि बढीमा १५ दिनसम्ममा नागरिकता पाउने व्यवस्था मिलाइको महानिर्देशक थापाले बताए ।
चाँडो चाहिएको छ ?
१० हजार रुपैँया तिरेमा आवेदन दिएको २ दिनपछि पासपोर्ट पाउन सकिनेछ । अन्य साधारण प्रक्रियाबाट आउँदा भने पुरानै प्रक्रिया अनुसार पाउनेछ ।
हुलाकीअनल़ाइन - २०७३ असार १९, आईतवार १५:१३